PVC Ishidi, Kk Ishidi, Hdpe Ishidi - Lida
Sinikeza ishidi le-PVC, ishidi le-PP, ishidi le-HDPE, induku ye-PVC, ipayipi le-PVC, ipayipi le-HDPE, ipayipi le-PP, iphrofayili ye-PP, induku yokushisela i-PVC kanye nenduku yokushisela ye-PP yezinhlobo ezahlukahlukene zezicelo.
I-Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd.is ngumkhiqizi ohlonishwayo oholayo kubuchwepheshe be-extrusion bemikhiqizo ephezulu yokusebenza kwepulasitiki eChina. Sinikeza ishidi le-PVC, ishidi le-PP, ishidi le-HDPE, induku ye-PVC, ipayipi le-PVC, ipayipi le-HDPE, ipayipi le-PP, iphrofayili ye-PP, induku yokushisela i-PVC kanye nenduku yokushisela ye-PP yezinhlobo ezahlukahlukene zezicelo.
Selokhu yasungulwa ngo-1997 i-Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. idale isiko lokuqhubeka komkhiqizo nokuthuthukiswa kwensizakalo, futhi kungekudala yavela yaba yinkampani eyaziwa umhlaba wonke. Siqhubeke nokwethula ezindaweni zokukhiqiza ezithuthukisiwe zakwamanye amazwe futhi kuze kube manje sinezindawo ezingama-20 ezithuthukisiwe zamashidi, izikhungo ezingama-35 zamapayipi neminye imikhiqizo yepulasitiki. Le nkampani ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-230000, futhi umkhiqizo wonyaka udlula amathani angama-80000. Yithina kuphela inkampani esahlela futhi senza indinganiso kazwelonke yemikhiqizo yephepha lepulasitiki.
Kuze kube manje imikhiqizo ithunyelwe emazweni angaphezu kwama-30, njengeMelika, iNgilandi, iCanada, i-Australia, iSingapore, iMalaysia, iThailand njalonjalo.
Siphumelele ukulinganisa okuhle kuwo wonke amaklayenti ethu ngemikhiqizo yokusebenza ephezulu, amanani entengo kanye nensizakalo yokwazisa.
Izinga lemikhiqizo nezinsizakalo zethu lilinganiswa ngesisekelo samazinga nemihlahlandlela kazwelonke neyamazwe omhlaba
Ukwehliswa Kwamazwe Ngamazwe
Sithole isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwemvelo kwe-ISO14001 ngo-2008.
Selokhu yasungulwa ngo-1997 i-Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. idale isiko lokuqhubeka komkhiqizo nokuthuthukiswa kwensizakalo
Sizoya embukisweni we-CHINAPLAS 2021 eShenzhen kusuka ngomhlaka 13 Ephreli kuya kumhlaka 16 Ephreli. Okulandelayo ulwazi oluningiliziwe kulo mbukiso: Idokodo Lethu No.: 16W75 Usuku lombukiso: 13, Ephreli. kuya ku-16, Ephreli. Imikhiqizo yethu: amashidi e-PVC, amashidi e-PP, amashidi e-HDPE, izinduku ze-PVC, amapayipi e-UPVC kanye ...
Emkhakheni wezinkampani eziyishumi eziphezulu embonini yamabhizinisi alula eChina, iBaoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. iwine isihloko sokuhlonishwa kwamabhizinisi emikhakha yamapulasitiki emikhakha yezimboni ephezulu kakhulu yaseChina (amaphepha epulasitiki). Selokhu yasungulwa ngo-1997, uLida Plastic ubelokhu ebambelela ...
Ikhwalithi Yomkhiqizo Oqinile weLida Plastic Ukufinyelela Izinga Elithuthukisiwe Lamazwe Omhlaba Noma Langaphandle
Iphaneli yeshidi le-Lida Plastic Rigid PVC selihloliwe futhi laqinisekiswa yiminyango efanelekile, kuze kufike ezinhlinzweni zesiFundazwe saseHebei ukwamukela izinyathelo zokuphathwa kwezinga elijwayelekile zomhlaba wonke, zanqoba ukulawulwa nokuphathwa kwemakethe yesiFundazwe saseHebei okukhishwe "ukwamukelwa ...